Health – Page2– aajnepal
मुखको दुर्गन्ध हटाउने घरेलु उपाय
February 15, 2019 aajnepal 0
मुख दुर्गन्धित हुने र सास गन्हाउने समस्याले धेरै जसोलाई पिरोलेको हुन्छ । भेटघाट, बैठक, कुराकानी आदिमा आफ्नो सास गन्हाउने डरले कतिपय मानिसहरु टाढैबाट बोल्ने गरेका हुन्छन् । तर समाधानको उपाय खासै खोजी गरेको पाइदैन । […]
गाजर खाने महिलामा स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम
एक अध्यननले गाजर खाने महिलाहरुमा भविस्यमा हुनसक्ने स्तन क्यान्सरको सम्भावना ६० प्रतिशतले कम हुने देखाएको छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार प्राकृतिक रुपमा गाजरमा पाइने रसायननै यो सम्भावना देखिएको हो । हुन त बैज्ञानिकरुले गाजर खानामा समावेश […]
ब्लड प्रेसर लो भएमा अपनाउनु पर्ने उपायहरु !
उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ । रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ । तपाई वा तपाईको कोही आफन्तजन न्यून छ […]
कागती स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी
– कागती स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी फल हो । स्वास्थ्यमा यसले पार्ने फाइदा र विशेष खालको स्वादका कारण कागती विभिन्न प्रकारका भोजनमा प्रयोग गरिन्छ । यसले तौल नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्मका काम गर्छ […]
चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो […]
नङ किन फुल्छ ? कुन औलाको नङ फुल्दा के हुन्छ? जानीराखौ, नङबाट तपाइको भाग्य, जानकारीको लागी पढौं र सेयर गरौ ।
नङ किन फुल्छ ? कुन औलाको नङ फुल्दा के हुन्छ? जानीराखौ, नङबाट तपाइको भाग्य केटाकेटी, युवायुवती वा बूढाबूढी सबैको औंलाको नङ फुलेको पाइन्छ। बालबालिकाहरू नङ फुले नयाँ लुगा लगाउन पाइन्छ भनेर रमाउँन्। के साँच्चै नङ […]
पहेंलो दाँत सफा सेतो बनाउने उपाय, जानकारीको लागी पढौं र सेयर गरौं
काठमाडौं । दाँतमा पहेँलोपन पानीमा हुने केमिकलहरु, सुर्ती, पाना र रंग प्रयोग गरिएका खानेकुराको धेरै प्रयोगले आँउछ । आकर्षित गर्नको लागि मोती जस्तो चम्किलो दाँतसहितको मुस्कानले धेरै काम गर्छ । तर, आजकाल धेरै जसो मानिसहरु […]
यी ५ कारणले पोल्ने गर्छ पिसाब, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, सबैको जानकारीको लागी सेयर गरौं ।
मानव शरीरका सम्पूर्ण विकारहरु बाहिर निकाल्ने जम्मा दुई उपाय छन् । एउटा पित्तबाट र अर्को मुत्रनलीबाट । मुत्रनलीबाट निस्किने पिसाबले हाम्रो शरीरका सबै प्रकारका नचाहिने तत्वलाई बाहिर निकाल्छ । तर, पिसाबमै खराबी आउँदा वा सहज […]
गर्भ पतन गराएपछि फेरि कहिले देखि यौनसम्पर्क गर्न मिल्छ ?
मुनिता (नाम परिवर्तन) नुवाकोट जिल्लाको वेत्रावतीबाट काठमाण्डु बौध्दमा रहेको एउटा गलैँचा कारखानमा उनको नातेदारको पछिलागेर काम गर्न आएकी थिइन । लगभग एक बर्ष पछिको कुरा हो, एक दिन आफ्नो ब्वाइ फ्रेण्ड्को दबावमा परेर उनी यौन […]
प्रकृतिको नियम नै यस्तो छ कि मानिसले जन्म लिन्छ जवान हुन्छ बुढो हुन्छ अनि प्राण छोड्छ । अब बैज्ञानिकहरुले बुढो नदेखिने औषधी बनाएका छन् । बैज्ञानिकहरुले मान्छेलाई सँधै जवान राख्ने औषधी पत्ता लगाएको दावी गरेका […]